Qalinleyda & Qoraaladda - #1Araweelo News Network
Wax ka Baro Dhinta iyo Noocyadooda Araweelo News Network. Magaca soomaaliga: #Dhikri/#ColloriyeMagaca carabiga: #نبات_العنشطMagaca qalaad: More...
Araweelo News Network. Midnimadii fashilantay ee dhexmartay Somaliland iyo Somalia 1960 waxaa laga dhaxlay masiibo lama illaawaan ah oo ay sabab u ahayd dawlad ku salaysnayd Somaliweyn fawdo ah oo dal iyo dawlad More...
Araweelo News Network. Ambassador Barkhad Kaariye Goblantooy adduunyooy, Guryo ba’ay ma waydide, Saakana ma geeraa! Garashiyo sokeeyiyo, Ruux laga gabbada iyo, Birma-geydo ma lahoo, Waa More...
Boqorkii ‘Sheekooyinka gaagaaban’ ee Soomaalida oo geeriyooday
“Maktabad weyn ayaa duntay, waadi cilmi sida ayaa gudhay, oo Saciid Jaamac Xuseen ayaa geeridiisa laga soo sheegay London.“ Cabdiwahaab Axmed Qoraa madaxbannaan BBC News Somali Deegaanka Yufle More...
W. Q. Rashiid Sheekh Cabdillaahi ‘Gadhwayne’ Araweelo News Network. Allah (SWT) ha u naxariisto Siciid Jaamac Xuseen. Geeridu naxdin bay leedahay, waase xaq Alle oo waa lama-seegaan. Waxa uu ahaa aqoonyahan More...
Araweelo News Network. Saaxiibkeen, baraheennii, madadaaliyihii, aqoonyahankii dunida uu sidii mayay u maray inooga warrami jiray, maamulihii madaxtooyada Villa Soomaaliya, mutulayaasha SSF, SSDF iyo SNM-ta More...
By admin On Wednesday, June 8th, 2022
W/Q: Maxamuud Cali Sh Maxamed (Walaaleye). “Markay dani meeday tidhi, maxaan talo meel ka deyey; Markay dani maaha tidhi, weydiiyey, qof meel ka deyey, Markay dani maaha tidhi, ku laabtay halkaan ka More...
Araweelo News Network. Waxa aan Canbaaraynayaa Xadhiga, Jidh-dilka, Caddaadiska, Cago-juglaynta iyo Cabudhinta lagula kacaayo saxaafada madaxa banaan ee Jamhuuriyada Somaliland, waxaanan sigaara u dhaliilayaa More...